လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက ပျားရည်သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးပဝေဏသီ အချိန် များက ပျားရည်ဟာ အလွန်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့အတွက် ကုန်သည်ကြီးများနှင့် မြေပိုင်ရှင်ကြီးများက ပျားရည်ကို ငွေအဖြစ် တန်ဖိုးထားလက်ခံခဲ့ကြသည်။
ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ဒေသကို နွားနို့နှင့် ပျားရည်ပေါတဲ့ဒေသလို့ ညွှန်းဆိုရေး သားခဲ့ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ ပျားရည်ဟာ အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ ဆေးတစ်ပါးလို့ပြောကြသည်။ ပျားရည် သည် (၁)အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ကူးစက် ရောဂါများကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ (၂) အစာအိမ်နာကို သက်သာစေသည်။ (၃) မသန့် တဲ့အနာတွေကို သန့်ရှင်းစေသည်။ (၄) အသားအရေခြောက်သွေ့တာကို ပြန်လည်စိုပြည်စေသည်။ (၅) ဗိုက်မအီမသာ ဖြစ်တာ သက်သာပြီး အစာကြေလွယ်သည်။ (၆) ကင်ဆာကို တိုက်ထုတ်နိုင်သော အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များလည်း ထုတ်ပေးသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များက ပျားရည်ဟာ လူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေးများနဲ့ သကြားတုများကြောင့် နောက်တန်းရောက်သွား ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာက ပျားရည်ဟာ စွမ်းအားထက်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေးများကတောင် မသတ်နိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သတ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပြသကြပါသည်။ ပျားရည်တွင် ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်ဆားများ၊ အသားဓာတ်များနှင့် အခြားအဟာရဓာတ်များပါဝင်သည်။
ပျားရည်ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး ၇မျိုး
အနားဝန်းကျင်ရှိ အပျက်အစီးများကို သန့်စင်ပြီး သင့်အရေပြားကို ပြန်လည်သန်စွမ်းကြီးထွားစေသည်။ အရောင်အရမ်း လျော့ကျစေသည်။ အမာရွတ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ တစ်သျှူးကို ကသိကအောက်မဖြစ်စေပါ။ မနာကျင်စေပါ။ ပျားရည်လိမ်းထားပေးလျှင် ပိုးသန့်ဆေး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို တဖြည်းဖြည်းသတ်နိုင်သည်။ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ၊ ခြေပြတ်လတ်ပြန်ဒဏ်ရာ၊ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကြောင့် အနာပြည်တည်ခြင်းများ၊ အိပ်ရာနာ၊ ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာအနာနှင့် အခြားအနာများစသည်တို့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဆေးရုံများ၌ အနာကျက်အောင် ပျားရည်ဖြင့်ဆေးထည့်ပေးကြသည်။
တော်တော်နဲ့ မကျက်နိုင်တဲ့ အနာများအတွက် ပျားရည်နှင့်ဆေးထည့်ပါက အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ရရှိစေသည်။ အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းနှင့် အသေးအဖွဲအနာများအတွက် ပျားရည်ကိုသုံးရန် တိုက်တွန်းနေကြပြီဖြစ်သည်။ အနာကိုသန့်ရှင်းပြီးနောက် ပျားရည်ကိုအနည်းငယ်နွေးအောင် နွှေးပြီးမွှေကာ ပတ်တီးမှာဆွတ်၍ အုပ်ပေးကာထည့်ရ၏။ ဆိုးဝါးတဲ့ ဒဏ်ရာတွေမှာတော့ ဆရာဝန်ရဲ့ ကုသမှုအောက်မှာ လိုအပ်သလို လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ နယူးဇီလန်မှ သီးသန့်ပန်းပွင့်များမှထုတ်လုပ်တဲ့ ပျားရည်တစ်မျိုးမှာ အံ့သြဖွယ်ရာ ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်များရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(၂) အစာအိမ်နာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်
အစွမ်းထက်ကျော်ကြားတဲ့ ပျားရည်နှင့် အစာအိမ်နာကို ကုသပေးသည်။ အစာအိမ်အတွင်းနံရံမှာ အနာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ၀မ်းပျက်ခြင်းမဖြစ်အောင် တိုက်ဖျက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် ဗိုက်ပွခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းများမှ သက်သာစေသည်။
(၃) ရောဂါပိုးကို သေစေ၏
အစာအိမ်နာများ၏ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းထိမှာ ကဲ့သို့ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အစာစားပြီး တစ်နာရီခန့် သို့မဟုတ် ညအိပ်ခါ နီးမှာ ပျားရည် စားပွဲတင်တစ်ဇွန်းစာ သောက်ပါက အစာအိမ်နာမှ ကင်းဝေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(၄) ဓာတ်မတည့်ခြင်း သက်သာစေသည်
ပိုလန် ခေါ် ၀တ်မှုန်လေးများသည် သင့်အတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သို့သော် သင်နှင့် ပန်းဝတ်မှုန်တွေ ဓာတ်မတည့်ရင် တော့ မျက်ရည်ယိုခြင်း၊နှာစေးခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်းစတဲ့ ဓာတ်တုံ့ပြန်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဓာတ်မတည့်မှုများကို ဆေးဝါးများမပါဘဲ သက်သာစေရန် ပျားရည်နည်းနည်းစီကိုသောက်ပြီး စမ်းသပ်ပေးသွားနိုင် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့သော်ဤစမ်းသပ်ချက်တွေဟာ သိပ်တော့မသေချာလှဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
(၅) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်ကူညီတယ်
အီလီနွိုက်ယူနီဗာစီတီ၊ အစားအစာသိပ္ပံဌာနမှ ပါမောက္ခဒေါက်တာနစ်ကီရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ ပျားရည်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများတွင် ဖီနောနှင့် ဖလေဗင်နွိုက်များစွာ ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရပြီး ဗီတာမင်အီးထက်ပင် ပို၍ပါဝါအားကြီးကာ ကင်ဆာရောဂါများကို တိုက်နိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။
(၆) ဖရီးရက်ဒီကယ်များကို ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်
ပါမောက္ခ နစ်ကီရဲ့ပြောပြချက်အရ ပျားရည်ဟာ အသားထဲတွင် ဓာတ်တိုးခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချပေး နိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လေထဲရှိ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်သည် အသားထဲမှာ အစဉ်လိုက်ဓာတ်တုံ့ပြန်ကာ မကောင်းသည့် ဖရီးရယ်ဒီကယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေလျှက် ဓာတ်တိုးပါသည်။ ထိုဖရီးရက်ဒီကယ်များသည် ကျန်းမာရေး နှင့်မညီညွတ်သည့်အပြင် ၄င်းဖရီးရယ်ဒီကယ်များက သင့်အစားအစာ၏ အနံ့အရသာကိုပါ ပုပ်သိုးပျက်စီးစေပါသည်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ထည့်ပေးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ အသားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ဈေးမှဝယ်ပြီး အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ပျားရည်အနည်းငယ်နှင့် နယ်ပြီးမှချက်ပါ။
(၇) လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုကို စွမ်းအင်ပိုရစေသည်
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာစေပါတယ်။ နေ့စဉ်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ရန် စွမ်းအင်လိုတယ်။ ထိုစွမ်းအင်များကို ကာဗို ဟိုဒြိတ်များမှ ရရှိစေပါတယ်။ အလယ်အလတ် သွက်လက်လှုပ်ရှားနေသူတွေ အတွက် ပျားရည်ဟာ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ် အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၄င်းဓာတ်က သင့်ကြွက်သားများကို သန်မာစေသလို တစ်သျှူးပျက်စီးခြင်းမှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလည်း တိုးမြှင့်သန်မာစေပါတယ်။
ပျားရည်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ သို့သော်ပျားရည်စစ်လေ အရောင်ရင့်လေဖြစ်သည်။ ပျားရည်စစ်မစစ်ကို သေချာစိစစ်ဖို့တော့ လိုသည်။ အခန်းအပူချိန်မှာ မီးဖိုချောင်တွင် သိမ်းထားနိုင်သည်။ နေရောင်နှင့် မထိတွေ့ရပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထား ပါက အခဲများ စုပုံကျတတ်သည်။ ( သူငယ်ချင်းတစ်ဦး ပြောတာက သက်တမ်းရင့်ပျားရည်ဟာ အရောင်ရင့်ပြီး သက်တမ်းနု ပျားရည်ဟာ အရောင်ဖျော့ပါသည်။)
သတိပြုရန် – တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား ပျားရည်မတိုက်ရပါ။
Ref: Health Digest Journal Vol. (7), No (1) – Oct. 14, 2009.
Posted by Alex Aung at 8:48 PM